China PLC နှစ်ထပ် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ လေဟာနယ် homogenizer ရောနှောစက်|အလှကုန် စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများ |ZhiTong
PLC နှစ်ထပ် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ ဖုန်စုပ်စက် ရောစပ်စက်|အလှကုန် စက်ပစ္စည်း
1. အလှကုန် စက်ပစ္စည်းControl cabinet ကို PLC သို့မဟုတ် ခလုတ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။
2. အစာကျွေးခြင်း (အစိုင်အခဲနှင့် အရည်များကို အလုပ်ခန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်ကျွေးပြီးနောက် ရောနှောပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်)
3. ရှုပ်ထွေးသော ခြစ်ခြစ်ဘုတ်ပြားကို ရောစပ်ထားသော oar သည် ရှုပ်ထွေးသော ဟင်းချက်နည်းတိုင်းအတွက် သင့်လျော်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေပါသည်။
4. Polytetrafluroethylene scraping board သည် ရောစပ်ထားသော groove ၏ကိုယ်ထည်နှင့် ဘွိုင်လာနံရံရှိ viscosity ပစ္စည်းများကို ခြစ်ထုတ်ရန်၊
5. Cosmetic Machinery သည် သင်ယူရလွယ်ကူသော ဆန်းသစ်သော emulsifying ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို ဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ကန့်သတ်ချက်များအားလုံးကို အလွယ်တကူ ချိန်ညှိနိုင်သည်။လက်များသည် စွန်းထင်းနေသော ပစ္စည်းများပင်ဖြစ်သော်လည်း ထိန်းချုပ်ရန် လွယ်ကူသေးသည်။
6. Control cabinet ကို PLC သို့မဟုတ် ခလုတ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။
7. အစာကျွေးခြင်း (အစိုင်အခဲနှင့် အရည်များကို အလုပ်ခန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်ကျွေးပါ၊ ထို့နောက် ရောနှောပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက်မဖြစ်စေရန်)။
8. ရှုပ်ထွေးသော ခြစ်ခြစ်ဘုတ်ပြားကို ရောစပ်ထားသော oar သည် ရှုပ်ထွေးသော ဟင်းချက်နည်းတိုင်းအတွက် သင့်လျော်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေပါသည်။
9. Polytetrafluroethylene ခြစ်ခြင်းဘုတ်သည် ရောစပ်ထားသော groove ၏ကိုယ်ထည်နှင့် ဘွိုင်လာနံရံရှိ viscosity ပစ္စည်းများကို ခြစ်ထုတ်ရန်၊
10. ဂျာမန်နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော တူညီသောဖွဲ့စည်းပုံသည် တင်သွင်းလာသော နှစ်ဆစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကို လက်ခံပါသည်။အမြင့်ဆုံး emulsifying လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းသည် 4,200rpm သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံး ဖြတ်တောက်မှုဒဏ်မှ 0.2-5μm နှင့် ပြည့်မီနိုင်သည်။
11. Homogenizer ကို ဘွိုင်လာအောက်ခြေတွင် မော်တာပါဝါ ပိုမိုသေချာစွာ နှင့် ခိုင်ခံ့အောင် တိုးမြှင့်ပေးသည်။D8ur ထုတ်လုပ်မှုအနည်းငယ်ဖြင့်၊ ၎င်းသည် တစ်သားတည်းဖြစ်တည်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်သည်။
12. Mightiness balance isotactic curve rotor သည် လက်ရာမြောက်ပြီး ဟစ်အော်ရန် သေချာစေရန် အရည်မြင့်မားသော စွမ်းရည်မြင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပွတ်တိုက်ခြင်း၊ centrifugal ကို နားလည်ရန် stator နှင့် ကိုက်ညီသော ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ကိုက်ညီပါသည်။အရေပြားဘွိုင်လာကိုယ်ထည်နှင့် ပိုက်မျက်နှာပြင်မှန်ပေါ်လစ်တိုက်ခြင်း 300EMSH (သန့်ရှင်းရေးအဆင့်) သည် နေ့စဉ်ဓာတုဗေဒနှင့် GMP စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ၊
13. အရည်မြင့်မား-capability ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံမှာညှပ်, ပွတ်တိုက်, centrifugal သေချာအောင်လက်ရာမြောက်သောနှင့်အော်;အရေပြားဘွိုင်လာကိုယ်ထည်နှင့် ပိုက်မျက်နှာပြင်မှန်ပေါ်လစ်တိုက်ခြင်း 300EMSH (သန့်ရှင်းရေးအဆင့်) သည် နေ့စဉ်ဓာတုဗေဒနှင့် GMP စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ၊
14. ထိန်းချုပ်မှုစနစ်- ခလုတ်ထိန်းချုပ်မှု၊ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုစီကို သီးခြားထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ထိတွေ့မျက်နှာပြင် ထိန်းချုပ် panel ကို ရွေးချယ်နိုင်သည် ။
၁၅။ဖုန်စုပ်စက် emulsifier ရောနှောစက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သောအမျိုးအစားများစွာပါဝင်သည်။တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစနစ်များတွင် အပေါ်ပိုင်းတစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း၊ အောက်ပိုင်းတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပသွေးလှည့်ပတ်မှုကို တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း ပါဝင်သည်။
၁၆။အလှကုန် စက်ပစ္စည်းရိုးရှင်းသောလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှု၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ကောင်းမွန်သောတစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း၊ မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု၊ အဆင်ပြေသောသန့်ရှင်းရေး၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ သေးငယ်သောကြမ်းပြင်နေရာနှင့် မြင့်မားသောအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ခြင်းစသည့်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်။
၁၇။အလှကုန် စက်ပစ္စည်းimproted double-end mechanical seal effect ကို လက်ခံပါသည်။ အမြင့်ဆုံး emulsifying လည်ပတ်မှု အမြန်နှုန်းသည် 3500rpm သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး မြင့်မားသော ဖြတ်တောက်ခြင်း ဒဏ်မှ 0.2-5um သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
18. ပင်မဘွိုင်လာအဖုံးသည် ရုတ်သိမ်းသည့်စနစ်ကို လက်ခံနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လွယ်ကူပြီး သန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ပို၍ထင်ရှားသည်၊ ပင်မဘွိုင်လာသည် တိမ်းစောင်းနေသောအထွက်ကို လက်ခံနိုင်သည်။
19. စက်သည် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် တင်သွင်းလာသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို လက်ခံကျင့်သုံးသည်။
20. တူညီသောအချိန်ပိုကြာကြာ တူညီနေစေရန် စက်ပြင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက် အအေးခံစနစ်၊
၂၁။အလှကုန် စက်ပစ္စည်းရေနွေးငွေ့နှင့် လျှပ်စစ်အပူပေးရန်အတွက် ကွဲပြားသော ဂျာကင်အင်္ကျီဒီဇိုင်းများ ရှိသည်။
22. လေဟာနယ်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ပန့်နှင့် အလုပ်သမားများအတွက် ဘေးကင်းရေး အကာအကွယ် ကိရိယာများစွာ၊
၂၃။အလှကုန် စက်ပစ္စည်းဟိုက်ဒရောလစ် ရုတ်သိမ်းစနစ်၊ ရောစပ်စနစ်၊ Homogenizer စနစ်နှင့် အပူပေးအအေးပေးစနစ်၊
24. Brushless မော်တာသည် ဖုန်မှုန့်များ မထုတ်လုပ်ပါ၊ ဆူညံသံနည်းပါးပြီး တည်ငြိမ်သော လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။
ပိုမိုကြာရှည်စွာ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေသော သက်တမ်းအတွက် စက်ပြင်အအေးခံစနစ်၊
25. ဘွိုင်လာအဖုံးကို လွတ်လပ်စွာ ရုတ်သိမ်းနိုင်ပြီး ဘွိုင်လာအတက်အဆင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော ဆီဖိအားရုတ်သိမ်းရေးစနစ်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
26. ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းပါရှိသောအဆင့်မြင့်သောတူတူဖော်စပ်နိုင်မှု (စက်မှုတံဆိပ်သည် Germany Bergman ထုတ်ကုန်ကိုလက်ခံသည်) နှင့် emulsifying rotation speed 0-3500 rpm ။
27. အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ပြီးပြည့်စုံသော emulsion ထုတ်ကုန်ကိုရရှိရန် ဆီနှင့်ရေအဆင့်ဆင့်ပစ္စည်းများကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ရောစပ်ပါ။ပစ္စည်းကို လေဟာနယ်အောက်ရှိ ပိုက်တစ်ခုပေါ်အခြေခံ၍ ဆီတိုင်ကီနှင့် ရေတိုင်ကီမှ emulsifying tank ထဲသို့ ဆွဲသွင်းရန် ညွှန်ကြားထားသည်။
တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း- ဆေးဝါး emulsion၊ ဆီမွှေး၊ ခရင်မ်၊ မျက်နှာဖုံး၊ ခရင်မ်၊ တစ်ရှူးများကို တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းကို တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း၊ ဖျော်ရည်၊ ပုံနှိပ်မင်၊ ယိုအစားအသောက်လုပ်ငန်း- ချောကလက်ခွံ၊ သစ်သီးပျော့ဖတ်၊ မုန်ညင်း၊ ကိတ်မုန့်၊ အသုပ်ဆော့စ်၊ အချိုရည်များ၊ သရက်သီးဖျော်ရည်၊ ခရမ်းချဉ်သီးပျော့ဖတ်၊ သကြားရည်၊ အစားအစာ ဆန်ပြုတ်၊ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ၊ စသည်တို့။ နာနိုပစ္စည်းများ- နာနိုကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ်၊ နာနိုအပေါ်ယံပိုင်း၊ နာနိုပစ္စည်း အမျိုးမျိုး additives စသည်တို့
ယခင်- အကြိုရောသမမွှေစက်|အလှကုန် စက်ပစ္စည်းများဖြင့် ဖုန်စုပ်စက် အမျိုးအစားတူ ခရင်မ်ရောစပ်စက်
နောက်တစ်ခု: အပေါ်ပိုင်း homogenizer|အလှကုန် ရောနှောစက်ဖြင့် လေဟာနယ်ကို တူညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်း emulsifier